Breaking News : रबि समर्थक र प्रहरी बीच आज पनि झडप, अश्रुग्याँस प्रहार ! | | MeroKhabarSathi
Breaking News : रबि समर्थक र प्रहरी बीच आज पनि झडप, अश्रुग्याँस प्रहार !
चितवन ३२ साउन । सालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा ‘ सिधा कुरा जनतासंग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रबि लामिछाने सहित अन्य ३ जना पक्राउको बिरोध गर्दै लामिछाने समर्थकले आज पनि भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनिहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि र भरतपुरको चौविसकोठीमा प्रर्दशन गरेका हुन् ।
प्रर्दशनकारी र प्रहरीविच केहीवेर झडप समेत भएको छ । शनिवार अपरान्ह रबि समर्थकले प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीले जवाफी लाठि चार्ज गर्यो । प्रहरीले लाठि चार्ज गर्दा समेत भिड नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि केहि राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । झडपका क्रममा केहि घाइते समेत भएको बताइएको छ ।
बाटो विराएर मानव बस्तीमा पसेको गैंडाको उद्धार